Lalàna Efa Taloha Be fa Tatỳ Aoriana vao Hita hoe Tena Ilaina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabuverdianu Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Koreanina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mongol Myama Ndebele (Zimbabwe) Niue Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tigrigna Tiorka Tseky Twi Tzotzil Télougou Urhobo Valencienne Vietnamianina Waray-Waray Yorobà Éwé
Rehefa ho tonga tao amin’ny Tany Nampanantenaina ny firenen’Israely, 3 500 taona teo ho eo lasa izay, dia nampanantena azy ireo Andriamanitra hoe hiaro azy tsy ho tratran’ireo “areti-mandoza” hitany tany Ejipta. (Deoteronomia 7:15) Nomeny toromarika mazava tsara momba ny fahadiovana, ohatra, izy ireo. Natorony azy ireo koa hoe ahoana no hisorohana aretina sy hisakanana an’izany mba tsy hiparitaka. Ireto misy ohatra:
Namoaka lalàna Andriamanitra hoe tsy maintsy mandro sy manasa ny akanjony ny Israelita.—Levitikosy 15:4-27.
Noresahiny koa hoe ahoana no tokony hatao rehefa te hanao maloto. Hoy izy: “Tokony hisy toeram-pivoahana azonao ampiasaina eny ivelan’ny toby, ka any no handehananao. Ary tokony hisy hazo maranitra any aminao, miaraka amin’ny fitaovanao hafa, ka rehefa hipetraka hininginingina eny ivelany ianao dia mihadia lavaka amin’ilay hazo, ary mitodiha ka totofy ny dikinao.”—Deoteronomia 23:12, 13.
Natokan-toerana elaela izay olona noeritreretina hoe tratran’ny areti-mifindra. Rehefa sitrana ilay olona, dia tsy maintsy mandro amin’ny rano sy manasa ny akanjony aloha. Aorian’izay izy vao azo lazaina hoe ‘madio’, dia mahazo miverina ao an-tranony.—Levitikosy 14:8, 9.
Natokan-toerana izay olona nikasika faty.—Levitikosy 5:2, 3; Nomery 19:16.
Mbola tsy nahay momba ny resaka fahadiovana sy aretina ny mpitsabo, dia efa nanana lalàna momba an’izany ny Israelita. Efa tatỳ aoriana be vao hitan’ny mpitsabo hoe tena ilaina ireny lalàna ireny.
Tsy dia nahalala nadio kosa ny firenena hafa tamin’izany andro izany.
Naloto daholo, ohatra, na ny manodidina na ny rano na ny sakafo satria navelan’ny olona teny rehetra teny fotsiny ny fako. Be dia be àry ny olona narary sy ny zazakely maty.
Tsy nahafantatra firy na tsy nahalala mihitsy momba ny mikraoba sy ny otrikaretina ny mpitsabo tamin’izany. Ran’androngo, na tain-gisandrano, na fatina totozy, na pipỳ, na mofo efa bobongolo, ohatra, no nataon’ny Ejipsianina fanafody. Tia nampiasa dikin’olombelona na taim-biby koa ny mpitsabo tany Ejipta.
Naloto ny Reniranon’i Nil sy ny lakandrano avy ao, ka lasa nidiran’ny katsentsitra isan-karazany ny Ejipsianina. Be dia be ny narary vokatr’izany. Be dia be koa ny zazakely matin’ny aretin-kibo na aretina hafa vokatry ny sakafo maloto.
Ny Israelita kosa tsy mba hoatr’izany. Tsy dia narary izy ireo satria nanaraka ny lalàn’Andriamanitra momba ny fahadiovana sy ny aretina.
Siansa sy Baiboly: Mifanaraka Siansa & Baiboly
Mifanaraka Amin’ny Siansa
Hizara Hizara Lalàna Efa Taloha Be fa Tatỳ Aoriana vao Hita hoe Tena Ilaina
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fahadiovana?
Fomba Dimy Hanatsara ny Fahasalamanao